Indasitiri Encyclopedia |
Ndeapi Matanda Matatu-eatatu Anogona Kuunza Mufaro Kune Vana?
ne admin pane 21-07-21
Matoyi anogara achiita basa rakakosha muhupenyu hwevana. Kunyangwe mubereki anoda vana anonzwa kuneta pane dzimwe nguva. Panguva ino, hazvidziviriki kuva nematoyi ekudyidzana nevana. Kune akawanda matoyi pamusika nhasi, uye anonyanya kupindirana ndeemapuranga ejigsaw puzzle ...
Ndeapi Matoyi Anogona Kutadzisa Vana Kubva Kunze Panguva Yechirwere?
Kubva pakatanga denda iri, vana vave kusungirwa kugara pamba. Vabereki vanofungidzira kuti vakashandisa simba ravo rinotamba kutamba navo. Hazvigoneki kuti pachave nenguva dzavasingakwanise kuita zvakanaka. Panguva ino, vamwe vanogara pamba vangangoda toy yakachipa ...
Matoyi ane Njodzi Asingatenge KuVana
Matoyi mazhinji anoita kunge akachengeteka, asi kune njodzi dzakavanzika: dzakachipa uye dzakaderera, dzine zvinhu zvinokuvadza, zvine njodzi zvakanyanya pakutamba, uye zvinogona kukuvadza kunzwa uye kuona kwemwana. Vabereki havagone kutenga aya matoyi kunyangwe kana vana vachivada uye vachichema nekuvakumbira. Kamwe matoyi ane ngozi ...
Vana Vanodawo Kushushikana Kununura Matoyi?
Vanhu vazhinji vanofunga kuti matoyi ekuderedza kushushikana anofanirwa kuve akagadzirirwa vanhu vakuru. Mushure mezvose, kushushikana kunowanikwa nevakuru muhupenyu hwezuva nezuva kwakasiyana kwazvo. Asi vabereki vazhinji havana kuziva kuti kunyangwe mwana ane makore matatu ekuberekwa aigona kuunyana kumeso pane imwe nguva sekunge vaitsamwisa. Izvi ndizvo chaizvo ...
Pachave Nechinoshanduka Kana Vana Vabvumidzwa Kutamba neMatoyi Panguva Yakatarwa?
Parizvino, mhando dzakakurumbira dzematoyi pamusika ndeyekuvandudza uropi hwevana uye nekuvakurudzira kuti vagadzire vakasununguka mhando dzese dzechimiro uye mazano. Iyi nzira inogona kukurumidza kubatsira vana kurovedza maoko-uye nehunyanzvi hwekuita. Vabereki vakashevedzwawo kuti vatenge matoyi evakasiyana ...
Huwandu hweMatoyi Hunokanganisa Kukura Kwevana?
Sekuziva kwedu tese, matoyi anoita basa rakakosha kwazvo muhupenyu hwevana. Kunyangwe vana vanogara mumhuri dzisina kupfuma vanowana pano neapo mibairo yekutambisa kubva kuvabereki vavo. Vabereki vanotenda kuti matoyi haagone chete kuunza mufaro kuvana, asi zvakare kuvabatsira kudzidza yakawanda yakapusa zivo. Tichawana ...
Nei Vana Vachigara Vachiwana Vamwe Vechidiki Matoyi Anokwezva?
Iwe unogona kazhinji kunzwa vamwe vabereki vachinyunyuta kuti vana vavo vanogara vachiedza kutora matoyi evamwe vana, nekuti ivo vanofunga kuti matoyi evamwe vanhu akanaka kwazvo, kunyangwe kana vaine mhando imwechete yematoyi. Zvakaipisisa, vana vezera rino havanzwisise vabereki vavo ...
Sarudzo Yevana Yekutamba Inogona kuratidza Hunhu hwavo?
Wese munhu anofanira kunge akaona kuti kune akawanda uye akawanda marudzi ematoyi pamusika, asi chikonzero ndechekuti izvo zvido zvevana zviri kuramba zvichiwedzera nekusiyana. Mhando yematoyi anodiwa nemwana mumwe nemumwe anogona kunge akasiyana. Kwete izvozvo chete, kunyangwe mwana mumwe chete anozove nezvakasiyana zvinodiwa ku ...
Nei Vana Vachida Kutamba Mapurasitiki Akawanda uye Matanda?
Nekuvandudzwa kwakasiyana kwematoyi, vanhu vanoona zvishoma nezvishoma kuti matoyi haachisiri chimwe chinhu chekuti vana vapfuure nguva, asi chishandiso chakakosha kukura kwevana. Iwo echinyakare matoyi ematoyi evana, evacheche matoyi ekugezera uye epurasitiki matoyi akapihwa mutsva chirevo. Vazhinji pa ...
Nei Vana Vachifarira Kutamba Dollhouse?
Vana vanogara vachida kutevedzera hunhu hwevakuru muhupenyu hwavo hwezuva nezuva, nekuti ivo vanofunga kuti vakuru vanogona kuita zvinhu zvakawanda. Kuti vazive fungidziro yavo yekuve masters, vagadziri vezvidhori vakanyatsogadzira matoyi emadhora ematoyi. Panogona kuve nevabereki vanonetseka nezve vana vavo vari ...
Zvinonakidza Kurega Vana Vachiita Vayo Voga Matoyi?
Kana iwe ukaendesa mwana wako muchitoro chekutambisa, iwe uchaona akasiyana matoyi ari kupenya. Kune mazana emapurasitiki nematoyi ematanda anogona kugadzirwa ekugezesa matoyi. Pamwe iwe uchaona kuti marudzi mazhinji ematoyi haakwanise kugutsa vana. Nekuti pane ese marudzi ese eanoshamisa mazano mune chi ...
Sei Kudzidzisa Vana Kuronga Matoyi Avo?
Vana havazive izvo zvinhu zvakanaka, uye ndezvipi zvinhu zvisingafanirwe kuitwa. Vabereki vanofanirwa kuvadzidzisa iwo chaiwo mazano panguva yakakosha yevana vavo. Vana vazhinji vakashatiswa vanozvikandira pasi kana vachitamba matoyi, uye pakupedzisira vabereki vanovabatsira nhengo ...